Global Voices teny Malagasy » Ejipta : Fanaingan-tsoroka Revolisionera Tamin’ny Fametraham-pialanà Kabinetra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Novambra 2011 13:22 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika nirinandrea
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Ity lahatsoratara ity dia ampahany manokana amin'ny lahatsoratray mikasika ny Revolisiona ao Ejipta  2011 .
Ny Kabinetran'i Dokotera Essam Sharaf dia vao avy nanontany raha afaka ny hametra-pialana izy ireo ary ny Supreme Council for Armed Forces(SCAF) na ny Filankevitra Ambonin'ny Hery Mitam-piadiana dia mbola eo an-dalam-pandraisana fanapahan-kevitra na ho ekena ilay fametraham-pialana na tsia. Ho an'ireo mafàna fo sy mpanao hetsi-panoherana niady tamin'ny polisy sy ny miaramila ao anatiny sy ary manodidina ny kianja Tahrir efa ho telo andro izao  , dia tsy nitondra zava-baovao teo ambony latabatra ilay vaovao. Ny zavatra tena nangatahan'izy ireo dia ny hialan'ny SCAF eo amin'ny fitondrana ary hanome ny fahefana amin'ny governemanta sivily.
@monaeltahawy  : Nandritra ny #Jan25, ireo miaramila dia nitazam-potsiny raha toa ny polisy ka nitifitra kosa ireo mpanao hetsi-panoherana. Ankehitriny ny miaramila dia miara-mitifitra amin'ny polisy. Mazava hoe iza no hombàn'ny #SCAF ao #Tahrir
@3effat  : Hoy ny mpanao hetsi-panoherana iray: “Tantawy sy ny SCAF no olana fa tsy izay fatinà kabinetra #Tahrir
@sultanalqassemi  : Breaking Al Jazeera : manaiky ny fametraham-pialan'ny governemanta Ejiptiana ny SCAF
@blakehounshell  : N ametra-pialana ilay kabinetra Ejiptiana kanosa sy banga ridana : tamin'ny fotoana farany nisian'izany dia nijanona tao amin'ny biraony ihany izy ireo.
@arabist  : Ilay fametraham-pialan'ny kabinetra Ejiptiana dia tsy afaka ny handalo fotsiny raha ohatra ny olona misolo azy ka mahavita azy.
@jonjensen  : Tifitra mavesatry ‘ny polisy mankany amin'ny vahoaka ao amin'ny làlana Mohamed Mahmoud. Henoko ny balan'ny basy manao dom-berina amin'ireo tranobe sy ny manda fiarovana. #Egypt #Tahrir
Ity lahatsoratra ity dia ampahany manokana amin'ny lahatsoratray mikasika ny Revolisiona ao Ejipta 2011 .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/11/23/25805/
 Revolisiona ao Ejipta: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/egypt-protests-2011/
 telo andro izao: https://globalvoicesonline.org/2011/11/21/egypt-battle-for-tahrir-continues-for-third-day/
 @3effat : https://twitter.com/#!/3effat/status/138689968804597760
 @hindhassan : https://twitter.com/#!/hindhassan/status/138703535725486080
 @TravellerW : https://twitter.com/#!/TravellerW/status/138688001076236288
 @shadihamid : https://twitter.com/#!/shadihamid/status/138688584684290048
 @Amiralx : https://twitter.com/#!/Amiralx/status/138689863850536962